सामाजिक विभेदविरुद्ध फाल्गुनन्द जयन्ती- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
सामाजिक विभेदविरुद्ध फाल्गुनन्द जयन्ती
बलिप्रथा, महिला विभेद र छुवाछूतविरुद्ध लागेका सामाजिक अभियन्ता ०६६ मा राष्ट्रिय विभूति घोषित भएका हुन्
(इलाम) — राष्ट्र्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको १३५ औं जन्मजयन्ती ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । किराँत धर्मको प्रवर्द्धनसँगै सामाजिक विभेदविरुद्ध फाल्गुनन्दले पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप तीनै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा उनको सम्झनामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
जन्मजयन्तीको अवसरमा इलामको फाकफोकथुमको रुपाटार, फूएतप्पा, माङसेवुङको लारुम्बा, सन्दकपुरको जमुना, मावु, माइनगरपालिका, पाँचथरको लव्रकुटी, मिक्लाजुङलगायत क्षेत्रमा विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकुदलगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिए । विसं २०६६ साल मङ्सिर १६ गते सरकारले महागुरु फाल्गुनन्दलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको हो ।
महागुरु फल्गुनन्दले सांस्कृतिक रूपमा प्रयोग गरिने मदिरा, बलिप्रथा, महिला विभेद र जातीय विभेदविरुद्ध राणा शासन कालमा नै अभियान सुरु गरेको र त्यसको सान्दर्भिकता अहिले प्रष्ट भएको अभियान्ताहरू बताउँछन् ।
‘माहागुरुको दर्शनले कुनै एक समुदाय र जातिको मात्र हितको कुरा उठाएको छैन,’ सिद्ध किरात हाँङसाम युमा माङहिमका अध्यक्ष पञ्च योङहाङले भने, ‘उहाँको दर्शन र सन्देशले सबै मानवजातिको हित र उत्थानको परिकल्पना गरेको छ ।’
फाकफोकथुम गाउँपालिकास्थित रुपाटारमा उहाँले प्रतिपादन गरेको धर्मअनुसार बृहद मन्दिरसमेत निर्माण गरिएको छ । यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको हो । त्यस्तै लारुम्बा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पनि धार्मिक स्थल निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।
धार्मिक क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध ढंगले काम अघि बढाएको फाकफोकथुमको रुपाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभासद धिरेन्द्र शर्माले बताए । कार्यक्रममा सहभागीले महागुरु जन्मजयन्तीको अवसरमा राज्यले बिदा नदिएकोमा दुखेशो गरे । इलामका माइनगरपालिका, माङसेवुङ र फाकफोकथुम गाउँपालिकाले मात्र सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।
इलामको इभाङस्थित चुक्चिनाम्बामा विसं १९४२ सालमा जन्मिएका फाल्गुनन्दले ७ वर्षको उमेरदेखि नै ज्ञान प्राप्त गरेर समाज सुधारमा लागेको किराँत धर्मालम्बीको विश्वास छ । भारतीय सेनामा समेत काम गरेका फाल्गुनन्द फर्केर धर्म प्रचारमा लागेको इतिहास छ । महागुरु फाल्गुनन्दले पाँचथरको लब्रे र सिलौटी, ताप्लेजुङको कावेली, निगुरादिन, कुम्भकर्ण, इलामको जितपुरलगायत स्थानमा किराँत मन्दिर बनाएका थिए ।
समाज सुधारकसँगै किराँत धर्मालम्बी धर्मगुरुलाई दैवी शक्ति प्राप्त व्यक्तिका रूपमा सम्झन्छन् । धर्मगुरुको सम्मान र स्मृतिमा किराँत बाहुल्य क्षेत्रमा मन्दिर निर्माण गरेर सामाजिक सुधार र धार्मिक बाटोमा हिंड्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । किराँतीहरूले प्रयोग गर्ने मुन्धुमलाई लिपिबद्ध गर्ने काम पनि उनले गरेको जानकार बताउँछन् । फाल्गुनन्दले प्रतिवादन गरेको धर्मलाई किराँत हाङसाम साम्यो भनिन्छ । सत्य र शान्तिको मार्गमा लाग्न धर्ममार्फत् अभियान चलाएकाले यो धार्मालम्बीलाई सत्यहाङवा पनि भनिन्छ ।
महागुरु फाल्गुनन्दको निधन २००५ सालमा पाँचथरको सिलौटीमा भएको हो । तपस्या गरेका स्थान, जन्मस्थान, निधन भएको स्थान र महत्त्वपूर्ण काम गरेका क्षेत्रलाई अहिले तीर्थस्थलका रूपमा लिइने गरेको छ ।
१९८८ वैशाख २४ गते पाँचथरको लव्रेमा पूर्वका किराँत जम्मा गरी गुरुले सत्यधर्म मुचुल्का तयार पारेर प्रचार गर्दै महिला विभेद, बलिप्रथा, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सामाजिक र जातिय विभेदको विरूद्धमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले अभियान चलाएको पाइन्छ ।
यसैगरी ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघको आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ ।
फुङलिङको काहुलेस्थित किराँत हाङसाम माङहिममा आयोजित कार्यक्रममा शुभकमना आदान–प्रदान गरिएको थियो । फाल्गुनन्दको जीवनी यहाँ प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसअघि फुङलिङ बजारमा जातीय झाँकीसहितको र्‍याली निकालिएको थियो । संघले आइतबार कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो ।
दिवसको अवसरमा ताप्लेजुङका फुङलिङ नगरपालिका, फक्ताङलुङ, मेरिङदेन, आठराइ त्रिवेणी र सिदिङवा गाउँपालिका सार्वजनिक बिदा दिए । पालिका र वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था र पालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्यसंस्थाहरू बन्द रहे । पाँचथरका भने सबै स्थानीय तहले बिदा दिएको बताएका छन् । फुङलिङ नगरपालिका र फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले भने गत वर्षदेखि नै बिदा दिन थालेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:०९
“फिल्मको झमक रोचक”
साहित्यकार झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘जीवन काँडा कि फूल’ मुलुकभर प्रदर्शन भइरहेको छ । फरक शारीरिक अवस्था भएकी झमक धनकुटा नगरपालिका–६ कचिडेस्थित निवासबाट फिल्मबारे प्रतिक्रिया दिन व्यस्त छिन् । मदन पुरस्कार विजेता घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी :
के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल ?
सामान्यतः साहित्यिक सिर्जना अनि पठन । पुस्तकहरूमा हराउँदा निकै आनन्द आउँछ ।
कुन पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले त कर्ण शाक्यको ‘म सक्छु’ र नीलम कार्की निहारिकाको ‘योगमाया’ पढ्दै छु । दुवै पुस्तक उत्प्रेरणात्मक छन् । मेरो आफ्नै लेखन चाहिँ ठिकठिकै चल्दै छ । मुड भएको बेला लेख्छु ।
फिल्म कत्तिको हेर्नुभएको छ ?
पहिले खुब हेरिन्थ्यो ।
पहिलो पटक हेरेको नेपाली फिल्म ?
धेरै वर्ष पहिले नेपाली ‘संघर्ष’ हेरेकी थिएँ । कविताराम श्रेष्ठले बनाउनुभएको । उहाँ स्वयम्ले पनि अभिनय गर्नुभएको थियो । टेलिचलचित्रमध्ये ‘अविरल बग्दछ इन्द्रावती’ र ‘दलन’को सधैं स्मरण गर्छु । केही अंग्रेजी, हिन्दी र जापानी फिल्म पनि हेरेकी छु ।
सम्झन लायकको कुनै बायोपिक छन् कि ?
छन् नि । ‘हेलेन केलर : द स्टोरी अफ माइ लाइफ’ विशेष सम्झिन्छु ।
हेलेन केलर पनि तपाईंजस्तै फरक शारीरिक अवस्थाकी हुनुहुन्थ्यो, फिल्म हेर्दै गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
हेलेन केलर र ममा धेरै फरक छ । विकसित देशमा जन्मिएकी हुनाले उनले शिक्षादीक्षा र सुविधायुक्त जीवन बिताउन पाइन् । मैले उनको जस्तै अवसर पाएको भए साहित्यकार मात्र हुन्नथेँ, मेरो नामअगाडि वैज्ञानिक झमक घिमिरे भन्ने उपाधि पनि जोडिन्थ्यो । अर्थात् म वैज्ञानिक बन्थेँ ।
वैज्ञानिक हुने अवसर पाउनुभएको भए केमा केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो ?
आइस्टाइनले सापेक्षतावादको सिद्धान्त प्रतिपादन त गरे, त्यसपछि के छ त भन्ने प्रश्न उब्जिरहन्छ, त्यसमा म अनुसन्धान गर्थें भन्ने लागिरहन्छ ।
‘जीवन काँडा कि फूल’ फिल्म हेर्नुभयो त ?
आफ्नै जीवनीमा आधारित फिल्म नहेर्ने त कुरै भएन नि । तीन पटक हेरिसकेँ । हलमा चल्नुभन्दा अघि नै हेर्ने अवसर मिल्यो ।
कस्तो लाग्यो ?
आफैंमाथि बनेको फिल्ममा दर्शक बनेर हेर्दा पुरानो समाज चिहाएको महसुस भयो । मेरो भूमिका गर्ने कलाकार रोजिता बुद्धचार्य र अवस्था थापाले असाध्यै राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ । मेरो जीवन भोगाइबारे पात्रहरूले गरेको अभिनय मलाई विशेष रोचक लागेको छ । यो अहिलेको समाजको चित्रण होइन । कतिपयले मेरा बुबाआमालाई फिल्मको जस्तो फरक स्वभावको ठान्लान्, मलाई असाध्यै माया गर्ने आमाबुबाप्रति म नतमस्तक छु । फिल्ममा कतिपय कुरा बढाइचढाइ पनि भएको छ ।
फिल्मबारे के कस्ता प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
देश विदेशबाट प्रशस्तै प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । खासगरी विदेशमा बस्ने नेपाली मलाई बढी जिज्ञासा राख्ने गर्छन् । सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि टेलिफोन म्यासेजमा मात्र नभई कतिपय त घरैमा आएर समेत फिल्मबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । बायोपिक र अरू फिल्ममा फरक अवश्य हुन्छ । (खुट्टाका औंलाले लेखिसकेपछि लामो समय हाँस्दै) सिर्जनामा कहीँ ताली र कहीँ गाली त जहाँ पनि भइहाल्छ नि ।
तपाईंले साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ । फिल्म निर्माणको उद्देश्यले कथाको माग पनि भएको छ कि ?
ठ्याक्कै मनको कुरा उठाउनुभयो । मलाई फिल्म बनाउन कथा माग भएका छन् तर म यसबारे अहिल्यै सोचमा छैन ।
नेपाली फिल्म कस्तो बनिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाली समाज झल्किने यथार्थपरक हुनुपर्छ । काल्पनिकताका नाममा कोरा कल्पना बेचेर हुँदैन ।
प्रस्तुति : रमेशचन्द्र अधिकारी
प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १०:०६